7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Phenylpiracet
AASraw na-emepụta NMN na NRC ntụ ntụ n'ọtụtụ!
Ndị R & D mmeghachi omume
Ọgwụ mgbochi ọrịa kansa
/blog/gallery/7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke -Phenylpiracet
Ihe na 09 / 12 / 2018 by 阿斯劳 dere na gallery.
Phenylpiracetam bụ ihe ndị na-emepụta phenyl nke ọgwụcetam drug nootropic. Ọ na - eme ka arụ ọrụ ahụ dịkwuo elu ma na - eme ka ọnụnọ na - egbochi oyi na nchekasị. Nchọpụta nke anụmanụ na-atụ aro ụbụrụ, antidepressant, anticonvulsant, antipsychotic, nchegbu nchegbu na mmetụta nchekwa. A na-ewere ya dịka onye mmepụta ihe na-akpali akpali ma dị na listi doping. Azụpụtara ya na 1980s na Russia ma eleghị anya maka iji agha na egwuregwu.
Phenylpiracetam Chemical Njirimara
Phenylpiracetam ndị ọzọ aha
• (RS) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
• (±) -2- (4-phenyl-2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide
Ụdị nke na-eto eto C 12 H 14 N 2 O 2
Njirimara mpụga / ọdụ data
Nọmba CAS 77472-70-9
218.26 g · mol -1
Usoro nhazi nke ogige ahụ nwere abụọ isomers: S na R. Ha abụọ nwere mmetụta dị mma na psyche dị ka antidepressant. Agbanyeghị, R-isomer siri ike, ebe ọ bụ na, n'adịghị ka ụdị S, mgbakwunye na-emetụta ọrụ dị ka ebe nchekwa na okwu. Ọ na - eme ka njikọ nke ụbụrụ dị na ụbụrụ, na - eme ka njikọ nke RNA dịkwuo mma, na - enye ọbara kachasị mma. E nwekwara ụdị nke atọ nke phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Ọ bụ ngwakọta agbụrụ nke ma isomers, nke na-agwakọta ihe onwunwe ha. Ka ọ dị ugbu a, ezigbo R-isomer nke ọgwụ adịghị maka ire ere. Ya mere, kpachara anya ma ọ bụrụ na ị zụrụ phenylpyricetam ga-enwe mmetụta na-adịghị ike. Ọ bụrụ na usoro onunu ogwu zuru ezu, mgbe ahụ ikekwe nke a bụ ụdị S nke onyinye ahụ. Ngwaahịa anyị nwere ụdị SR, ma nwee uru niile nke ọgwụ.
Phenylpiracetam nkọwa zuru oke
E jirila ya mee ihe na ụmụ mmadụ dị ka ihe na-akpali akpali nke CNS, usoro nke locomotor, arụmọrụ egwuregwu na dịka nchịkwa, nke ọ bụ 30-60 ugboro karịa karịa piracetam. Ihe omumu nke anu aru na-egosi ihe omimi, antidepressant, anticonvulsant, antipsychotic, nchegbu nchegbu na ncheta oru.
Carphedon ntụ ntụ Pharmacology
Nyocha ole na ole dị omimi egosiwo na enwere ike imekọrịta n'etiti ọgwụ nke carphedone na mmụba nke ụfọdụ ọnọdụ encephalopathic, dịka ọnya ụkwara ọbara, ụbụrụ craniocerebral na ụfọdụ ụdị glioma.
Ọ na-eme ka ihe ngbu nke benzodiazepine diazepam gbanwee, na-emezi omume ịkpa, na-ebelata nystagmus na-agagharị n'azụ, na-echebe megide retrograde amnesia, ma nwee ihe ndị na-akwado ya.
Ikekwe, a pụrụ ịkpọ phenylpyracetam otu n'ime ọgwụ ndị kacha ike nootropic nke oge anyị. Emepụtara ya kpomkwem maka mmetụta siri ike na ọrịa ndị siri ike metụtara nsogbu ncheta, ikwu okwu, ma ọ bụ ịhazi mmegharị. Phenylpyracetam bụ ọtụtụ ugboro usoro a na-abawanye, nke a maara kemgbe oge Soviet Union nke ihe akpọrọ "pyracetam." Mgbakwunye nke otu phenyl so na-eme ka mmelite dị na pharmacokinetics nke ọgwụ (dịka ọmụmaatụ, ọbụnadị ịbanye n'ime ya site na mgbochi ụbụrụ ọbara), nke na-eme ka ọ dị ike na ngwa ngwa.
Phenylpiracetam ntụ ntụ Uru na dosages
Nootropin phenotropil (phenylpyrazetam) na capsules nwere ihe ndị a:
• Mee ka ọrụ ụbụrụ rụọ ọrụ;
• ime ọrụ nlegharị anya;
• mezi usoro nke ịnyefe mmetụta nhụjuanya n'ime usoro nhụjuanya dị n'etiti;
• na-emekwu arụmọrụ anụ ahụ;
• mma ọnọdụ;
• na-eme ka nrụgide nrụgide dịkwuo ukwuu
• na-eme ka ọgụ ghara ịdị;
• mee ka ihu anya na ọbara (karịsịa akụkụ aka);
• nwere mmetụta mgbochi mkpali na ọrịa analgesic na ndị ọzọ.
Ngwakọta nke ihe dị iche na-esi na 100 gaa na 250 milligrams kwa ụbọchị maka otu ọnwa, mgbe nke ahụ gasịrị, a ghaghị imebi ụbọchị 30. Phenylpyracetam adịghị akpata ụtaba na nkwụsị mgbaàmà.
Phenylpiracetam ntụ ntụ - Mmetụta na contraindications
N'ime mmetụta ndị a na - emetụta, a pụrụ ịchọta ike mkparịta ụka dị ike. Enwere ike ihi ụra nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-eri ihe mgbe 4 n'ehihie, ya mere ọ ga-egbu ya n'ụtụtụ. Ndị mmadụ na-ebute ọbara mgbali elu, ọ nwere ike ịbawanye ụba, ya mere na nke a, ị kwesịrị iji ihe ndị ahụ jiri nlezianya mee ihe ahụ. Isi ihe na-eme ka a ghara iji ihe ahụ eme ihe bụ mmadụ enweghị ndidi.
Nyocha banyere Phenylpiracetam
Nyocha banyere capsules nke phenotropil (phenylpyrazetam) bụ ihe na-enweghị isi. N'ikpeazụ, ndị na-aṅụ ọgwụ ahụ nwere ahụ ike, ịdị elu, ụra dị mma, ncheta na ọnọdụ, ụba abawanye. Ụfọdụ ndị, n'ụzọ megidere, kwuru na mmeri nke ụra na adịghị ike meriri ha. A ghaghị iburu n'uche na mmeghachi omume dị otú ahụ na-amalite n'ihi oké ike ọgwụgwụ, nchekasị na ike ọgwụgwụ uche. A naghị atụ aro ka ị gaa phenylpyracetam na-enweghị nhọpụta nke dọkịta.
Phenylpiracetam Ọ Dị Mma?
Ọ bụrụ na edepụtara ọgwụ ahụ na nchịkọta doping, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ọ dị irè. Naanị ebe a ọ dị irè naanị ruo oge ụfọdụ. Ee, ị ga-emekwu ihe. Kedu ihe na-eme mgbe ụbọchị 2 gasịrị? Ihe bụ isi bụ na a na-agbakwunye ike na ọrụ ka ọ bụrụ ihe na-emekarị, ọ bụrụ na m nwere ike ikwu ya. Na nootropil (ya bụ, piracetam) na-amalite ime ihe gbasara 2 izu. Ọ na-apụta na mmetụta nke ịmịpụta phenotropil, anyị pụtara ezigbo mmetụta nootropic, ga-amalite na 14 ụbọchị. Mana ya ka ị ga-enweta 2 n'izu izu na-akwado vivacity. Otú ọ dị, a na-enwe ndidi, ọgwụ ọjọọ riri ahụ na ọgwụ (phenyl group), ya mere, ọ na-abaghị uru.
Phenylpiracetam (Carphedon) ntụ ntụ Ọgwụgwọ, nchekwa, ole ị ga-aṅụ.
Anyị kwenyere na n'agbanyeghị etu esi gwa gị na "ọgwụ ahụ enweghị nchekwa ọ bụla," anyị anaghị akwado ya iji ihe karịrị izu 3, ọ na-agwụ gị ike n'ihi ndị na-ahụ maka ntanetị na-arụ ọrụ na oke ọsọ. N'ezie, n'echiche anyị, ọ kachasị mma iji phenotropic episodically, ma ọ bụ ihe ọmụmụ nke izu 2-3 ma mesoo ya dị ka "Turbo Mode".
Iji mezuo ihe omume, dịka e kwugoro, ọ dị mkpa ịṅụ ihe dị ka 2 izu dị n'elu. Na nkwakọ ngwaahịa ị ga-ahụ na ọ na-eburu ọnwa 3, clevermind.ru weere ya, nanị, njem azụmahịa, ebe ọnụahịa nke ọrụ ebube a bụ banyere 800 rubles (na njedebe nke 2014). Ya mere, nnyefe nke 3 izu:
Achọpụtala nke ọma na ịdị arọ mmadụ na-arụ ọrụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị erughị 70 n'arọ: mbadamba 1 (100 mg) kwa ụtụtụ, ọ bụrụ na enweghị mmetụta ọ bụla, tinye otu ọzọ, ma ọ bụ n'otu oge, ma ọ bụ n'ime awa 2-3. .
Ị karịa karịa 70 n'arọ: malite na 1st, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịgbanwe gaa na 2 ma ọ bụ ọbụna 3 kwa ụbọchị.
Carphedon ntụ ntụ Ogologo oge ole ka ọ ga - eme?
Ọgwụ ahụ nwere ihe 2 na ọnụego ya:
1. N'ime awa 5-6. Agba na-enwu gbaa, ike, itinye uche. Enweghị euphoria, ị ga-eche na anakọtara ma kpebisie ike, mana ị ga-aghọta nke a naanị mgbe mmetụta nke ọgwụ ahụ gafere. Oge dị n'etiti “chee echiche ime” dị mkpirikpi, ma ugbu a ọ kacha mma ka ị ghara imehie ihe. Okwu okwu na - adị ngwa, achọrọ m ikwu maka ihe niile, mana ọ bụrụ na enweghị ntị ọzọ, gụọ, dee, mmemme, n'ikpeazụ. Mmetụta ọzọ na-atọ ụtọ - Achọrọ m ka mmadụ niile kwuo okwu ngwa ngwa ma ọ bụ gụọ akwụkwọ ahụ ngwa ngwa nke na ị ga-eri ụfọdụ mkpụrụ okwu. Ndị na-agba ọsọ na-enwekwa obi ụtọ.
2. N'ime ụbọchị 10-14. Ebe nchekwa na ụbụrụ dịtụ mma, dịka ọ dị na nootropics. A na-ewepụ Bright FullHD nrọ, n'ihi ya ị nwere ike ịme "nrọ na-eduzi".
Mgbe ichere maka mmetụta?
Mgbe 20-60 nkeji, dabere na metabolism gị (metabolism). Nootropic utịp - mgbe 10-14 ụbọchị.
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Noopept
Umu ahihia ndi ozo iji mee ka ogbugba na vomiting
Ihe Nlekọta 15 Winstrol kachasị mkpa Ị Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta Winstrol Online
7 Best Nootropics (Smart Drugs) n'ahịa nke Armodafinil Ajụjụ 8 jụọ onwe gị tupu iwere Ceilistat ntụ ntụ
Copyright © 2021 aasraw ikike niile echekwabara.
Ngọnarị: Anyị anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara ngwaahịa erere na weebụsaịtị a. Enweghị ozi enyere na weebụsaịtị a ka FDA ma ọ bụ MHRA enyochala. A na-enye ozi ọ bụla e nyere na weebụsaịtị a ka anyị mara ihe anyị maara na-emeghị ya iji dochie ndụmọdụ nke dọkịta ruru eru. Ihe akaebe ma ọ bụ nyocha ngwaahịa ọ bụla nke ndị ahịa anyị nyere abụghị echiche nke aasraw.com na ekwesighi iwere dịka nkwanye ma ọ bụ eziokwu.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.scienceherb.com www.omagwu.cmoapi.com www.apicdmo.com